भयानक र रोमान्चक बन्दै सिरी ए अन्तिम ४, जुबेको कठिन ड्र, इन्टर माथि नापोलीको फराकिलो जित - Experience Best News from Nepal
सिरी ए फुटबल लगभग अन्तिम चरणमा रहेको छ भने अन्तिम ४ को स्थान समेत निकै सनसनीपूर्ण र रोमान्चक बनेको छ । उपाधी उचालेको युभेन्ट्सले आज कठिन ड्र निकालेको छ भने इन्टर मिलानले नापोलीसंग फराकिलो हार ब्यहोरेको छ ।
सिजन सकिदै गर्दा युभेन्ट्स, नापोलीले अन्तिम २ स्थान पक्का गरिसकेका छन् भने एटलान्टा र इन्टर मिलानले अन्तिम ४ का निम्ति संगर्ष गरिरहेका छन् । मिलान र रोमाको समेत संगर्ष जारि छ । १ खेल बाकि हुदा एटलान्टाको र इन्टर मिलानको समान ६६ अंक रहेको छ भने गोल अधारमा एटलान्टा शिर्ष स्थानमा छ । एटलान्टाले यो सिजन १०० औ गोल पुरा गरेको छ भने सिरी ए मा ७४ गोल गरेको छ ।
युभेन्ट्स र एटलान्टाको भिडन्तमा एटलान्टाले पहिलो हाफको ३३ औ मिनेटमा नै अग्रता लिएको थियो । आजै कप्तानको भूमिकामा प्रवेश गरेका बर्जाग्लीको अन्तिम खेल रहेको थियो । खेलको अन्तिम ८० औ मिनेटमा माण्डजुकिचको गोल संगै युभेन्ट्सले एटलान्टालाइ बरबरीमा रोक्न सफल बन्यो भने अन्तिम ९० औ मिनेटमा युभेन्ट्सका बर्नाडेसकीले रेड कार्ड पाएका थिए ।
यता नापोलीले इन्टरलाई ४-१ ले हरायो । नापोलीका निम्ति जेंलिसकी, मर्टेन्सले १- १ र रुइजले २ गोल गरे भने मिलानका इकार्डीले मात्र १ गोल गरे ।
अन्तिम खेल युभेन्ट्सले सम्पदोरिया, इन्टरले एम्पोली, मिलानले स्पाल, नापोलीले बोल्ग्ना र एटलान्टाले सस्सुलोसंग सामना गर्दै छ ।
रोनाल्डो पुन मैदान बाहिर !! को को फर्किदै छन् एम्पोली विरुद्ध खेल्न युभेन्ट्सको टिममा
रोनाल्डोको खेल आज !! जान्नुहोस कुन समयमा कोसंग हुदै छ खेल ?